Trump oo twitter-ka ku qeybiyay muuqaal dhiirrigelinaya cunsurinimada - Calanka.com
Trump oo twitter-ka ku qeybiyay muuqaal dhiirrigelinaya cunsurinimada
by admin · Published June 28, 2020 · Updated June 29, 2020
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Axad ah barta uu ku leeyahay twitter-ka ku qeybiyay muuqaal cunsurinimada caddaanka dhiirigelinaya kaas oo cunsuriyiin caddaan ah ay ku dhawaaqayaan ereyga “White power” oo ay micneheedu tahay “Awood caddaankaa leh”.
Trump ayaa muuqaalkan si deg-deg ah uga saaray kadib markii uu cambaareyn baahsan kala kulmay, laguna eedeeyay in uu ayidsan yahay ka madaxweyne ahaan micnaha ereygaas.
Muuqaalka uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa muujinaya mid ka mid ah taageerayaashiisa oo oo ku dhawaaqaya erayga “White power” xilli uu dibedbaxayay.
Muuqaalkan ayaa waxaa asalkiisa soo dhigay dalad lagu magacaabo The Villages taas oo ay ku mideysan yihiin dad howlgab ah oo ku nool gobolka Florida.
QORAALKA TRUMP UU TIR-TIRAY:
Dibedbaxa kooxdan caddaanka ah ee uu “taageeray” Trump ayaa kusoo aadaya xilli inta badan gobollada Mareykanka ay ka socdaan dibedbaxyo lagu taageerayo madowga, loogana soo horjeedo tacadiga booliska Mareykanka ku hayaan dadka madowga ah.
Si kastaba, dhawaan ayaa waxaa dagaal dhanka baraha bulshada ah waxaa uu ka dhex qarxay madaxweyne Trumo iyo maamulayaasha Twitter iyo Facebook kuwaas oo dhowr qoraal oo uu soo dhigay madaxweyne Trump qariyay sababo la xiriira shuruucdooda oo uu jabiyay.